Matsi Yekutanga Kugamuchira Chokwadi | Bhuku Regore ra2015
AKABHABHATIDZWA MUNA 1982
NHOROONDO YOUPENYU Paaiva kakomana José akatanga kufarira chokwadi nemhaka yerudo rwaairatidzwa nehama, kunyange zvazvo pasina aigona mutauro wemasaini muungano macho.
NDAKAVA matsi ndichiri mudiki, ndikabva ndadzidza mutauro wemasaini pachikoro chematsi. Ndakatanga kupinda misangano neZvapupu ndiine makore 11 pandakakokwa neimwe mhuri yeZvapupu yaigara pedyo nesu. Kunyange zvazvo ndisina kunzwisisa hurukuro dzaipiwa, ndakagamuchirwa nemufaro uye kubva ipapo ndakaramba ndichipinda misangano yacho. Vakawanda vemuungano yacho vaindikoka kuzodya pamwe chete navo uye kuti tiitewo zvimwe zvakasiyana-siyana.
Ndakava muparidzi muna 1982, ndikazobhabhatidzwa pava paya mugore iroro. Muna 1984 ndakachata naEva, uyo ariwo matsi. Kunyange zvazvo taisanyatsonzwisisa chimwe chokwadi cheBhaibheri, takaona kuti iri ndiro sangano raJehovha nemhaka yerudo rwevanhu vacho, uye tainakidzwa nekuva muungano.—Johani 13:35.
Muna 1992, pakaitwa urongwa hwekuti hama nehanzvadzi dzidzidziswe Mutauro Wemasaini wokuAmerica (ASL). Vaparidzi ava vakatanga kutsvaga matsi vachidziparidzira mashoko akanaka. Basa rekuparidza mundima yemutauro wemasaini rakabva ratanga kuwedzera muna 1994, pakakokwa imwe hama nemudzimai wayo vachibva kuPuerto Rico, kuti vauye pabazi kuzodzidzisa hama nehanzvadzi 25 mutauro wemasaini.
Pava paya gore iroro, ini naEva takatanga kupinda neboka remutauro wemasaini rainge richangobva kuumbwa. Patainge tava kupinda misangano yemutauro wemasaini ndipo patakatanga kunyatsonzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri, zvakadai sezvakaitwa naSatani achipikisa uchangamire hwaJehovha uye basa reUmambo hwaMesiya pachinangwa chaMwari.
Musi wa1 December 1995, ungano dzeMutauro Wemasaini wekuAmerica dzakaumbwa muSanto Domingo nemuSantiago. Pakazosvika August 2014, makanga mava neungano 26 dzemutauro wemasaini nemapoka 18.
Ini naEva takadzidzisa vana vedu vatatu mutauro wemasaini semutauro wavo wekutanga. Mwanakomana wedu mukuru, Éber, anobatsira pakushandurwa kwemutauro wemasaini pabazi remuUnited States. Ndiri mushumiri anoshumira muungano, uye Eva ndipiyona wenguva dzose.
Kuwedzera kwakaitika mundima yeMutauro Wemasaini wekuAmerica kubva muna 1995 kusvika muna 2014
Ungano 26, nemapoka 18